Yohane 18 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
18 Akuba ezitshilo ezi zinto, uYesu waphuma nabafundi bakhe baya phesheya komsinga wasebusika oyiKidron+ apho kwakukho umyezo, waza yena nabafundi bakhe bangena kuwo.+ 2 Ke kaloku uYudas, umngcatshi wakhe, naye wayeyazi indawo leyo, ngenxa yokuba uYesu izihlandlo ezininzi wayehlanganisana apho nabafundi bakhe.+ 3 Ngoko ke uYudas wathabatha ibutho lamajoni namagosa ababingeleli abaziintloko nawabaFarisi, beza apho nezikhuni zomlilo nezibane nezixhobo.+ 4 UYesu, ke ngoko, ezazi zonke izinto ezimzelayo,+ waya waza wathi kubo: “Nifuna bani na?” 5 Bamphendula bathi: “UYesu umNazarete.”+ Wathi kubo: “Ndinguye.” Ke kaloku uYudas, umngcatshi wakhe,+ naye wayemi kunye nabo. 6 Noko ke, akuthi kubo: “Ndinguye,” bahlehla+ baza bawela emhlabeni. 7 Ngoko ke wababuza kwakhona wathi: “Nifuna bani na?” Bathi: “UYesu umNazarete.” 8 UYesu waphendula wathi: “Ndinixelele ukuba ndinguye. Ukuba, ke ngoko, ndim lo nimfunayo, bayekeni aba bahambe”; 9 ukuze lizaliseke ilizwi elo walitshoyo esithi: “Kwabo undinike bona andilahlekelwanga nguye namnye.”+ 10 Wandula ke uSimon Petros, njengoko wayenekrele, walithi rhuthu waza waxabela ikhoboka lombingeleli omkhulu, walinqumla indlebe yalo yasekunene.+ Igama lekhoboka elo lalinguMalko. 11 Noko ke, uYesu wathi kuPetros: “Lifake ikrele kwisingxobo salo.+ Indebe andinike yona uBawo, andifanele na ngandlela zonke ndiyisele?”+ 12 Landula ke ibutho lamajoni nomphathi-mkhosi namagosa amaYuda ambamba uYesu aza ambopha, 13 aza amsa kuqala kuAnas; kuba wayengumkhwe kaKayafa, owayengumbingeleli omkhulu ngaloo nyaka.+ 14 UKayafa, enyanisweni, yayinguye lowo wacebisa amaYuda ukuba yayikokwengenelo yawo ngomntu omnye ukuba afe ngenxa yabantu.+ 15 Ke kaloku uSimon Petros kwakunye nomnye umfundi babemlandela uYesu.+ Loo mfundi wayesaziwa ngumbingeleli omkhulu, waza wangena kunye noYesu entendelezweni yombingeleli omkhulu, 16 kodwa uPetros wayemi ngaphandle emnyango.+ Ngoko ke omnye lo umfundi, owayesaziwa ngumbingeleli omkhulu, waphuma waza wathetha kumgcini-mnyango, waza wamngenisa uPetros. 17 Sandula ke isicakazana, umgcini-mnyango, sathi kuPetros: “Akunguye omnye wabafundi balo mntu nawe, andibi kunjalo?” Wathi: “Andinguye.”+ 18 Ke kaloku amakhoboka namagosa ayemi malunga nalapho, njengoko ayebase umlilo wamalahle+ eenkuni, ngenxa yokuba kwakubanda, yaye ayesotha. NoPetros wayemi kunye nawo esotha. 19 Yaye ngoko umbingeleli oyintloko wambuza uYesu ngabafundi bakhe nangayo imfundiso yakhe. 20 UYesu wamphendula wathi: “Ndithethe esidlangalaleni kulo ihlabathi. Bendisoloko ndifundisa kwindlu yesikhungu nasetempileni,+ apho onke amaYuda abuthelana khona; kwaye andithethanga nto emfihlekweni. 21 Kutheni ubuza mna nje? Buza abo bakuvileyo oko ndikuthethe kubo. Yabona! Aba bayakwazi oko ndiye ndakutsho.” 22 Emva kokutsho ezi zinto, omnye wamagosa owayemi khona apho wammpakaza+ uYesu ebusweni waza wathi: “Ngaba leyo yindlela ophendula ngayo umbingeleli oyintloko?” 23 UYesu wamphendula wathi: “Ukuba ndithethe kakubi, nikela ubungqina ngokuphathelele ububi obo; kodwa ukuba ndithethe ngokufanelekileyo, kutheni undibetha nje?” 24 Wandula ke uAnas wamthumela ebotshiwe kuKayafa umbingeleli omkhulu.+ 25 Ke kaloku uSimon Petros wayemile esotha. Bandula ke bathi kuye: “Akunguye omnye wabafundi bakhe nawe, akunjalo?” Wakhanyela waza wathi: “Andinguye.”+ 26 Elinye lamakhoboka ombingeleli omkhulu, elisisalamane somntu lowo undlebe yakhe wayinqumlayo+ uPetros, lathi: “Ndikubonile emyezweni unaye, akunjalo?” 27 Noko ke, uPetros wakhanyela kwakhona; waza ngoko nangoko umqhagi wakhonya.+ 28 Bandula ke bamsusa uYesu kuKayafa bamsa kwibhotwe lerhuluneli.+ Ke kaloku kwakusekuseni. Kodwa bona abangenanga kwibhotwe lerhuluneli, ukuze bangazenzi inqambi+ kodwa bakwazi ukudla ipasika. 29 Ngoko ke uPilato waphumela kubo phandle waza wathi: “Nimmangalela ngantoni lo mntu?”+ 30 Ekuphenduleni bathi kuye: “Ukuba lo mntu ebengengomenzi-bubi, ngesingamnikelanga kuwe.” 31 Ngoko ke uPilato wathi kubo: “Mthabatheni ngokwenu nize nimgwebe ngokomthetho wenu.”+ AmaYuda athi kuye: “Akukho mthethweni ngathi ukubulala nabani na.”+ 32 Oku, kukuze lizaliseke ilizwi awalitshoyo uYesu ukubonisa ukuba luhlobo luni na lokufa awamiselwa ukufa ngalo.+ 33 Ngoko uPilato wangena kwibhotwe lerhuluneli kwakhona waza wabiza uYesu, wathi kuye: “Unguye na ukumkani wamaYuda?”+ 34 UYesu waphendula wathi: “Ukutsho ngokuphuma kuwe na oku, okanye uxelelwe ngabanye na ngam?”+ 35 UPilato waphendula wathi: “Mna andingomYuda, andibi kunjalo? Luhlanga lwakowenu nababingeleli abaziintloko abakunikele kum.+ Wenze ntoni na?” 36 UYesu waphendula wathi:+ “Ubukumkani bam abuyonxalenye yeli hlabathi.+ Ukuba ubukumkani bam bebuyinxalenye yeli hlabathi, abalindi bam bebeya kulwa+ ukuze ndinganikelwa kumaYuda. Kodwa ubukumkani bam abusuki kulo mthombo.” 37 Ngoko ke uPilato wathi kuye: “Ke, ngoko, unguye na ukumkani?” UYesu waphendula wathi: “Nawe ngokwakho uthi ndingukumkani.+ Ndizalelwe oku, yaye ndizele oku ehlabathini, ukuze ndiyingqinele inyaniso.+ Wonk’ ubani ongakwicala lenyaniso+ uyaliphulaphula ilizwi lam.”+ 38 UPilato wathi kuye: “Yintoni na inyaniso?” Yaye emva kokutsho oku, waphuma kwakhona waya kumaYuda waza wathi kuwo: “Andifumani siphoso kuye.+ 39 Ngaphezu koko, ninesiko lokuba ndifanele ndinikhululele umntu ngepasika.+ Ngaba, ke ngoko, ninqwenela ukuba ndinikhululele ukumkani wamaYuda na?” 40 Ngoko bakhwaza kwakhona, besithi: “Mayingabi ngulo mntu, kodwa uBharabhas!” UBharabhas lo ke wayengumphangi.+